Bafuna uphenyo ngoNomusa Dube | IOL Isolezwe
Bafuna uphenyo ngoNomusa Dube
Isolezwe / 25 January 2013, 10:30am / CELANI SIKHAKHANE
Thuli Madonsela. Isithombe: Timothy Bernard
UBUHOLI boMkhandlu kaMasipala waseMbabazane KwaZulu-Natal bubhalele uMvikeli woMphakathi, u-Advocate Thuli Madonsela, incwadi ukuze aphenye uNgqongqoshe wezokuBusa nokuBambisana esifundazweni uNksz Nomusa Dube ngokuthi akukho yini ukugxambukela kwezombusazwe ngezinqumo zakhe.
Lo masipala usola uNksz Dube ngokuthi izinqumo zakhe zibukeka ziqhutshwa yizinjongo zezepolitiki ukuze alwisane nokukhishwa kweMeya ye-ANC eMbabazane.
Ekuqaleni kwaleli sonto i-ANC imemezele ukuthi ifuna uMnyango kaNksz Dube uwuphuce amandla lo masipala ngoba uhluleke wancama ukufeza izidingo zomphakathi kunalokho kubangwa izikhundla zobuMeya.
Ngonyaka odlule i-NFP ivote ne-DA ne-IFP nokuholele ekutheni kukhishwe iMeya ye-ANC uNkk Phindile Strydom noSomlomo uMnuz Mondli Mkhize.
Kulo mgqigqo kungene ezintanjeni i-NFP ngeMeya yayo uMnuz Mbuzeni Mkhize okunguyena okhona njengamanje.
Inkantolo ikuchithile ukukhishwa kwe-ANC kodwa ubuholi obukhona bafaka isicelo sokuphikisana nesinqumo.
Kumanje usuku lokubuyela enkantolo alukaziwa kodwa iMeya esaqhubeka ezintanjeni kusengeye-NFP.
UMnuz MKhize oyiMeya uthe abeneme neze ngoNgqongqoshe uDube ngenxa yokuthi bambona esebenzisa uhulumeni noMnyango awuholayo ukulwa izimpi zezepolitiki.
“Incwadi siyithumele ngoLwesihlanu lwangesonto eledlule kuMvikeli woMphakathi, u-Adv Madonsela, ngoba sibona ukuthi lapha kudlalwa ngathi. UNksz Dube usebenzisa amandla akhe budedengu ngakho sifuna uMvikeli aphenye. Kumanje basibizele emhlanganweni bewuMnyango okuyinto esingayazi ngoba umhlangano ubizwa nguSomlomo kamasipala,” kusho uMkhize.
Uthe uyasola ukuthi lo mhlangano sekuyiwo abazokhishwa kuwo kubuyiselwe abaholi be-ANC.
Eqhuba uthe njengomasipala abayazi le nto yokuthi basezinkingeni ngaphandle kokuthi kube nezinguquko ebuholini wathi ngisho umcwaningi mabhuku uyincomile indlela abasingethe ngayo imali futhi nentuthuko iyaya kubantu uma kuqhathaniswa nangaphambilini.
UNobhala we-ANC KwaZulu-Natal, uMnuz Sihle Zikalala, ekuqaleni kwesonto uthe lo masipala bafuna ubengaphansi kukahulumeni wesifundazwe ngoba izinto azihambi kahle wathi lokhu bebezokwenza ngisho noma ngabe ubuphethwe yibo.
Uthe naseMsunduzi bawumema uhulumeni wesifundazwe ukuthi ungenelele ekubeni kwakuphethe bona ngakho akukho okuhlukile kulokhu abafuna kwenzeke eMbabazane.
UNksz Dube yena wathi zonke izinqumo ebezithathwa kulo masipala kusuka ngoJuni wangonyaka odlule bezingekho emthethweni.
Okhulumela uMnyango kaNksz Dube, uMnuz Lennox Mabaso, uthe ngeke bakwazi ukuphawula ngalolu daba kodwa konke kuzokhulunywa emhlanganweni wanamuhla osemahhovisi kamasipala eMbabazane.